Guardiola oo eedeyn u jeediyay ciyaartoyda Manchester City, kadib guushii ay ka gaareen kooxda Wolverhampton – Gool FM
Guardiola oo eedeyn u jeediyay ciyaartoyda Manchester City, kadib guushii ay ka gaareen kooxda Wolverhampton
(Premier League) 15 Jan 2019.Tababaraha kooxda Manchester City Pep Guardiola ayaa ku eedeeyay ciyaartoydiisa inaysan si xoogan u cadaadinin Wolverhampton kadib markii uu xidigeeda Willy Boly qaatay kaarka roosaha, kulankii ay xalay labada kooxood ku wada ciyaareen horyaalka Premier League.
Kooxda Manchester City ayaa ku xasuuqday dhigeeda Wolverhampton 3-0 kulankoodii 22-aad horyaalka Premier League ay xalay ku wada ciyaareen Etihad Stadium.
Goolasha kooxda Manchester City ayaa waxay ka heshay xidigaha kala ah Gabriel Jesus oo 2 gool ah iyo Conor Coady.
Shabakada “Sky Sports” ayaa soo xigatay waxyaabihii ugu muhiimsanaa uu ka hadly Pep Guardiola kadib marka ay ciyaarta soo idlaatay wuxuuna yiri:
“Waxaan la ciyaarnay daqiiqado badan 10 ciyaartooy, waxay ahayd inaan noqono kuwo intaas kasii awood badan dhanka weerarka”.
“Waxaa jiray difaac xoogan, sidaas darteed ma aanan siinin fursad badan kooxda Wolverhampton, waxaan helnay 3 dhibcood si aan u sii cadaadino Liverpool”.
“Marka aad ciyaareyso kulan ka tirsan horyaalka, waxaa suuragal ah inaad dhibco lumiso, waxaana heysanaa rikoodh cajiib ah, laakiin waxaan sii sameyn karnaa shaqo itaas ka fiican”.
“Gabriel Jesus wuxuu doonayaa xili kasta inuu soo bandhigo wax walba ee awoodiisu gaarsiisan tahay, balse xili kasta waxaa muhiim ah in weeraryahanka uu dhliyo goolal, sidaas darteed wuxuu dhaliyay 6 gool labadii kulan ee lasoo dhaafay”.
Shaxda rasmiga ah ee kooxaha Manchester City vs Wolverhampton